ललितपुरमा एक व्यक्तिले १२ जनालाई कारोना सारेको पु ष्टि !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/ललितपुरमा एक व्यक्तिले १२ जनालाई कारोना सारेको पु ष्टि !!
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा केही दिनयता कोरोना संक्र`मतिको सं`ख्या बढिरहेको बेला ललितपुरमा एक व्यक्तिले १२ जनालाई कारोना सारेको पु`ष्टि भएको छ । यो सँगै ललितपुर जिल्लामा समु`दायमा कोरोना संक्र`मण फैलिएको देखिएको हो ।
कोरोना सं`क्रमति भएको पुष्टि भएसँगै ललितपुर जि`ल्लाको महा लक्ष्मी नगरपालिका ७, ८ र ९ गरी तीन वटा वडा सिल गरिएको छ । बल्खु स्थित बयोधा अस्पतालमा कार्यरत एक ल्याब नेक्नि`सियनले आफ्नै परिवारका नौ जना सदस्य र ललितपुरको महा लक्ष्मी नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्षका दुई छोरामा कोरोना संक्र`मण फैलाएको पाइएको हो ।
वडा अध्य`क्षका दुवै छोरा डाक्टर हुन् । यो सँगै वडा नं. ८ का वडा अध्यक्षका सबै परिवार होम क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । शनिबार नगरपालिकाले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्ने करिब २१३ जनाको पि.सी.आर. परी क्षणका लागि स्वाब पनि सं`कलन गरेको जनाएको छ । नेपाल समाचार पत्रमा यो खबर छ ।
यो पनि : मृ`त भनिएका व्यक्ति जीवित
पाल्पामा मृ`त भनी दाह सं`स्कार गरिएका व्यक्ति जी`वित भेटिएका छन् । गुल्मी जिल्ला रुरु गाउँपालिका¬ ५ बम्गाका ६५ वर्षीय श्याम शरण भण्डारी पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–१ अर्चलेमा जीवित अवस्थामा भेटिएको रिडीमा बसोबास गर्दै आएका चुरा`मणि तिमि`ल्सिनाले बताए । गुल्मी निवासी भण्डारी हाल रुपन्देही जिल्लाको मणि`ग्राममा सपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । श्याम शरण घरमा पु¥याउँदा परिवार र आफन्तहरुको भीडभाड थियो ।
केही दिनअघि रुरु गाउँ पालिका स्थित कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा पुरुषको ला`स भेटिएको थियो । पुरुषको लासलाई श्याम शरण लास भनी आफन्तले दाहसंस्कार गरेको आफन्तले जनाएका छन् । किरिया बसेको नौ दिनमा जीवित भेटिएपछि आफ`न्तहरु खुशी देखिएका छन् । पाल्पाका अर्चलेका भीष्मा पन्तले श्यामशरण जीवित भेटिएको जानकारी तिमिल्सिना लाई जानकारी गराउनु गराएका हुन् ।
बाँके मा एकै`चाेटि ४७ जनामा देखियाे काे`राेना संक्र`मण !
चीनले बनाएको कोरोना विरु द्धको खोप सोचेभन्दा चाँडै आउन सक्ने
भखरै काठमाडौँमा खतरा बढेपछि सरकारले थाल्यो यस्तो पहल
दुखद खबर ! काठमाडौंमा ८ को’रोना सं’क्रमित वे’पत्ता, सं’क्रमणको जो’खिम उच्च ! सबैलाई सचेत रहन आग्रह